I-Caribbean Seafront Luxury Villa yangasese ene-pool - I-Airbnb
I-Caribbean Seafront Luxury Villa yangasese ene-pool
Placencia, Stann Creek, i-Belize
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Herbert
Leli khaya eliklanywe ngokwezifiso lilungele iholide. Inamagumbi okulala amathathu, wonke anamagumbi okugezela angaphakathi, amakhishi amabili nendawo enkulu yokuhlala yangaphandle, kuhlanganise nendawo yokubhukuda. Ikhona ogwini, ulwandle lusekude kakhulu. Woza futhi ujabule!
Le villa enethezekile yasebhishi ephambili iyindawo ekahle kakhulu yokuvakasha yabantu abashadile, imindeni noma amaqembu amancane. I-villa isendaweni ephakathi kwamakhaya asebhishi angasese endaweni ethulile yezitshalo e-Placencia peninsula.
Ikhaya lakhiwe ngamakamelo amathathu.
Indawo yokuhlala esezingeni eliphezulu inamakamelo. Yakhiwe ngekamelo lokulala elikhulu, ikhishi eligcwele le-gourmet, igumbi lokuphumula, ubhavu wangasese oneshawa evulekile nosinki ababili. Osilingi be-Vaulted mahogany nezindawo zaphansi zepulangwe zinikeza ubuhle nokunethezeka. I-Veranda emboziwe engu-400 sq. ft. ihamba ngobude bekhaya futhi inikeza ukubukeka kolwandle ngokusuka emphemeni nangaphakathi kwekhaya. Ikamelo lokuphumula linosofa olala abantu ababili ontofontofo. Jabulela isidlo sakho sasekuseni emphemeni ubuka ukuphuma kwelanga njengoba ulwandle lukubanda kancane. Indlu iklanyelwe ukuvumela umoya wolwandle ungene kuyo yonke indlu njengoba indawo yokuhlala yangaphandle ihlangana nendawo yokuhlala yangaphakathi. Kukhona amayunithi e-AC ngalinye ekamelweni lokulala nasendaweni yokuphumula ukuze upholise iyunithi yokunethezeka kwakho. Amafeni kasilingi kuyo yonke indlu agcina umoya uhlanzekile.
Indawo yaphansi inikeza amakamelo amabili.
Ngalinye linombhede omkhulu negumbi lokugezela elingaphakathi, futhi lineminyango ephindwe kabili eholela ngqo kudekhi, indawo yokubhukuda nebhishi. Izindawo zinekhishi elincane phakathi kwamakamelo amabili, indlela elula yokugcina iziphuzo eceleni kwechibi ngaphandle kokungcebeleka. Iyunithi ngayinye ifakwe umoya oshisayo. Amayunithi aphansi avuleka ku-veranda engu-800 sq. embozwe nge-pool.
Indawo yokubhukuda ingusayizi okahle kakhulu wokukugcina upholile ngenkathi ujabulela ukubuka ulwandle. Jabulela amadekhi ne-veranda yokubhukuda ukuze ubhukude noma ugcwale ilanga. Kukhona ifenisha ehlukahlukene ye-patio, i-hammock enkulu, kanye nendawo yokosa igesi lapha. Kufanele nje uzibophezele ezinyathelweni ezimbalwa esihlabathini esimhlophe uye ebhishi lakho langasese elinezihlalo, i-hammock ne-palapa emboziwe.
Ekugcineni kunesitezi sesithathu - umpheme wokubheka ovumela ukubukeka kolwandle, i-lagoon, nezintaba zase-Mayan. Le ndawo ilungele ikhofi lesidlo sasekuseni kanye ne- 'sundowner' kusihlwa. Umpheme wokubheka unikeza ukubukeka kokuphefumula kwangempela.
Uma ungathandi ukupheka, umpheki wangasese angahlelwa. Cabanga nje, ukuthi uphumula echibini nomnikazi wendawo futhi umpheki wangasese uthi "isidlo sakusihlwa silungile"!
Umnakekeli wendlu uhlala emgwaqweni wonke.
I-villa yimizuzu engu-20 ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Placencia. Situsa kakhulu ukuqasha imoto.
Leli khaya lisendaweni yokuhlala yezitshalo. Usogwini lapha, futhi i- Kungamakhilomitha angu-4 ukuya edolobhaneni lase-Maya Beach, lapho kunama-bar akhethiwe, izindawo zokudlela nezitolo zokudla.
Kunamathuba amaningi okuvakasha endaweni ye-Placencia; I-SCUBA, i-snorkeling, uhambo lomfula wehlathi kanye nokudoba ngezindiza ukuze usho okumbalwa. Ukudoba yikilasi lomhlaba futhi kwenza i-Placencia ibe yikhaya lezingubo eziningi ezaziwayo zokudoba zamazwe ngamazwe. Ukutshuza kwenza lokhu kube indawo ethandwayo yabathandi be-scuba. Inqola yasemaphandleni ingeyesibili ngobukhulu emhlabeni futhi iyinjabulo kubo bobabili abaqavile nabasebemnkantsh 'ubomvu. Kukhona ukufinyelela okulula emgwaqeni omkhulu we-Hummingbird oholela enyakatho nezintaba nezindawo eziningi ezidumile zehlathi lemvula. Kukhona nama-spa amaningana osuku emaphandleni. Ungase ukhethe ukuhlala ekhaya, uhambe ebhishi, ujikeleze i-hammock, ufunde futhi ujabulele ukuba se-Belize enhle.
U-Herbert, imenenja yendlu, uzotholakala nganoma yimiphi imibuzo. Vele ushaye ucingo noma i-imeyili.